FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA PEKINGESE - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Pekingese
Alika Peking Lion
Alika lapa Peking
Ny Pekingese dia alika kely, mandanjalanja sy matevina. Izy io dia manana vatana be volo, hozatra izay lava kokoa noho ny halavany. Ny loha dia lehibe raha oharina amin'ny sisa amin'ny vatana, ka ny tampon'ny loha dia lehibe, malalaka ary fisaka. Ny tampon'ny tarehy dia fisaka. Ny sakamalao dia malalaka sy fisaka, matevina kokoa eo ambanin'ny maso, manasaraka ny faritra ambony sy ambany amin'ny tarehy. Mainty ny hoditra eo amin'ny vava. Ny orona mainty dia malalaka sy fohy. Ny nify dia mihaona ao anaty manaikitra miaraka amin'ny taolana valanorano malalaka. Ny maso lehibe, misongadina ary boribory dia mivelatra amin'ny sisin'ny maso mainty. Ny sofina miendrika fo dia apetraka eo an-jorony voalohany amin'ny tampon-karandohany, mivalampatra amin'ny lohany. Volom-borona tsara izy ireo mba hisehoany mifangaro amin'ny loha, manome azy endrika mahitsizoro. Fohy sy matevina ny hatoka. Fohy, matevina ary be volo ny tongotra. Miorina ambony ny rambony, somary arched ary entina miverina any aoriana. Ny akanjo ivelany dia lava sy matevina amin'ny endriny misy volom-borona be dia be. Malemy sy matevina ny akanjo ambany. Ny palitao dia misy loko rehetra, indraindray misy sarontava mainty.
chihuahua sy fifangaroana pincher kely
Pekingese dia alika kely be herim-po, mora tohina, mahaleo tena ary be fitiavana amin'ny tompony. Ireo alika mahafinaritra ireo dia afaka manao namana mahafinaritra. Raha be loatra ny sakafo, dia ho tonga matavy be ny Pekingese. Ity karazana ity dia mahatonga mpitily tsara. Ny Pekingese dia mety ho sarotra ny mamaky trano. Aza avela hivoatra ity alika ity Syndrome kely alika , fitondran-tena entin'ny olombelona izay inoan'ny alika fa misy azy mpitarika fonosana amin'ny olombelona. Izany dia mety hiteraka degre isan-karazany fihetsika ratsy , ao anatin'izany, nefa tsy voafetra ho maditra, tia tena, saro-piaro, fanahiana fisarahana , fiambenana , mimenomenona, mikitika, manaikitra ary mivalan-doha rehefa manandrana milaza aminao ny zavatra tokony hatao ny alika. Afaka mitandrina amin'ny olon-tsy fantatra izy ireo, ary mety hanjary tsy atokisana amin'ny ankizy sy ny olon-dehibe. Raha omenao ny sombin-databatra izy ireo, dia fantatra fa mandà tsy hihinana izy ireo, mba hampisehoana fa manjakazaka amin'ny tompony izy, toy ny tsy fahampian-tsakafo. Izy ireo dia mety ho lasa alika mahery setra sy be herim-po ka hatramin'ny adalan'ny hadalana rehefa manandrana izy ireo. TSY toetra Pekingese ireo. Izy ireo dia fihetsika vokatry ny famelan'ny olombelona azy ireo handray ny trano. Raha Pekingese no omena fitsipika tokony harahina, ferana ny zavatra misy azy ireo ary tsy avela hatao , miaraka amin'ny isan'andro entana an-tongotra hanamaivanana ny sainy ara-tsaina sy ara-batana, dia haneho toetra hafa tanteraka izy ireo, mahasarika kokoa. Tsy rariny ny mamela lanja mavesatra toy izany amin'ny alika kely toy izany, izay tsapany fa tsy maintsy hitazomana ny olombelona IZY. Raha vantany vao manomboka mampiseho ny Peke ianao dia afaka ny ho mpitarika ny fonosana matanjaka sy miorina tsara, dia afaka miala sasatra izy ary ho alika kely mahafinaritra.
Hahavony: 6 - 9 santimetatra (15 - 23 cm), lanja: 8 - 10 pounds (3.6 - 4,5 kg)
Ny Pekingese rehetra latsaky ny 6 pounds dia antsoina hoe Pekingese vita amin'ny tanany. Io no mpikambana kely indrindra amin'ny fianakavian'i Pekingese, ary ny habe malaza indrindra mandritra ny fivoaran'ny karazany any Shina. Mba ho tanany dia tokony ho 2 kilao (2,7 kg) na ambanin'ny zavatra rehetra izay tsy heverina ho tanany. Eo anelanelan'ny 6 sy 8 (2.7-3.6 kg.) Ny ponina dia heverina ho Mini Pekingese.
Ny Pekingese dia mazàna mahazaka sery mora be. Fahaterahana tena sarotra. Mora amin'ny kapila herniated sy kneecaps diso. Trichaiasis (kapoka mitombo mankamin'ny volomaso). Ny olana miaina sy ny aretim-po dia mahazatra ihany koa.
Pekingese dia tsara amin'ny fiainana an-trano. Tsy miasa intsony izy ireo ao an-trano ary hanao tsara raha tsy misy tokotany.
Pekingese mila a mandeha isan'andro , izay anaovan'ny alika voditongotra eo anilany na ao ambadik'ilay olona mitazona ny firaka, satria ny voajanahary dia milaza amin'ny alika fa ny mpitarika no mitarika ny lalana, ary io mpitarika io dia mila ny olombelona. Ny lalao dia hikarakara be dia be ny filan'izy ireo manao fanatanjahan-tena, na izany aza, toy ny karazany rehetra, ny lalao dia tsy hahatanteraka ny toetrany voalohany handeha. Ny alika tsy mahazo mandeha an-tongotra isan'andro dia toa mampiseho olana amin'ny fitondran-tena. Izy ireo koa dia hankafy romp tsara amin'ny faritra azo antoka sy malalaka tsy misy firaka, toy ny tokotanin-trano mimanda. Ataovy zatra Pash ny Peke anao raha mbola alika kely io. Nisy tompona nilaza tamiko fa ny Pekes dia handeha an-tongotra 4 kilaometatra amin'ny diabe isan-kariva.
Miaraka amin'ny alika salama, 10-15 taona eo ho eo.
Alika kely 2 ka hatramin'ny 4 eo ho eo
Ny famonoana sy fanosotra isan'andro ny palitao lava lava dia tena ilaina. Tandremo tsara ny manodidina ny foibe, izay mety ho lasa matotra sy matotra. Ny vehivavy dia nandatsaka ny akanjo ambany rehefa vanim-potoana. Shampooo maina tsy tapaka. Diovy ny tarehy sy ny maso isan'andro ary zahao ny tongotra volo raha misy burrs sy zavatra mifikitra ao. Ireo alika ireo dia mpandatsa-dra.
Ny Pekingese dia nahazo ny anarany avy tao amin'ny tanànan'ny Peking taloha, izay antsoina ankehitriny hoe Beijing. Noheverina ho alika masina izy ireo ary noheverina ho toy ny Foo Dog izay manaisotra ny fanahy. Ny tompon'ny mpanjaka sinoa ihany no azon'izy ireo ary noheverina ho semi-andriamanitra ary raha nangalatra ny iray tamin'ireo alika ireo ianao dia novonoina ho faty. Ny olona tsy manana laharana ambony dia tokony hiankohoka amin'izy ireo. Rehefa maty ny amperora iray dia natao sorona ny Pekingeseany mba hahafahan'ny alika hiaraka aminy hanome fiarovana any ankoatra. Tamin'ny 1860 dia nisongona ny lapan'ny mpanjaka emperora ny anglisy. Ny mpiambina ny emperora sinoa dia nasaina namono ireo alika kely mba hisorohana azy ireo tsy ho azon'ny 'devoly vazaha'. Dimy tamin'ireo Pekingese no velona ary natolotra ny Mpanjakavavy Victoria. Avy amin'ireo alika dimy ireo no niavian'ny Pekingese maoderina. Tamin'ny 1893 dia naseho voalohany tany Angletera ny karazany. Ny Pekingese dia neken'ny AKC tamin'ny 1909.
Herding, kilalao AKC
fisoratana anarana alika amerikana inc
mifangaro amin'ny bulldog anglisy
mini doberman mifangaro amin'ny chihuahua
PCA = Cluby Pekingese any Amerika
Kinny ilay Pekingese fotsy maka hatory
Zazakely Pekingese mainty 12 taona
Amie miaraka amin'i Missy sy Gerrick, Pekingese Sleeve roa nanavotra.
'Pidget dia Pekingese vavy purebred mena miaraka amina fikolokoloana alika kely, aseho eto amin'ny 10 taona. Alika be fitiavana sy be fitiavana izy! Tiany ny olona rehetra (indrindra ny ankizy!). Mifanaraka tsara amin'ny biby hafa izy. Tiany indrindra ny miaraka amin'ny alika lehibe. Manana fihetsika lehibe toa azy aho, heveriko fa alika lehibe koa izy! '
Sissie the Peke amin'ny faha-11 taonany— 'Tahaka an'i Pekes rehetra, manana toetra matanjaka be izy ary mpiara-miasa mahafinaritra indrindra hatramin'izay.'
voromahery miharo mpiandry alemanina
Sissie the Peke amin'ny faha-11 taonany— 'Sissie taorian'ny fanapahana fahavaratra voalohany indrindra! TIA izy satria mafana be any Kansas amin'ny fahavaratra. '
'Yao-Ling, zanak'alika Pekingese albino zanakay lahy efa 3 volana - tia mikimpy sy milalao izy nefa malefaka be. Nanaiky kokoa noho ny Peke hafa rehetra nifanena tamiko izy. Tena mora tohina izy nefa mitovy amin'ny Peke hafa ihany. Nalaiko ireto sary ireto rehefa niala sasatra teo amin'ny farafarantsika izy. '
'Yao-Ling zanak'alika Pekingese albino antsika lahy 3 volana'
Missy ny Pekingese any ivelany taorian'ny tafiotra ririnina PA izay nandatsaka lanezy 2 metatra
Baby Guera ny krema Pekingese amin'ny alika kely
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Pekingese
Pekingese sary 1
Pekingese sary 2
Pekingese Sary 3
Pekingese sary 4
Pekingese sary 5
Pekingese sary 6
Alika Pekingese: sary an-tsokosoko voaangona
Lisitry ny alika Rhodesian Ridgeback mifangaro
Fitaizana alika kely: andro iray amin'ny fiainana miaraka amin'i Mia the Blue-Nose American Bully (Bully Pit)
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika any Mountain Mountain
Fampahalalana sy sary kely momba ny alika kely Schnauzzie
Fampahalalana sy sary momba ny fihenan-kofehy vita amin'ny alika malefaka teratany malemy
Fampahalalana sy sary miteraka alika pyredane tsara
Fampahalalana momba ny fiompiana alika mpiompy aostralianina kely indrindra sy sary
laboratoara eskimo amerikana afangaro alika kely
Inona no lehibe alika kely no ataovy mahazo chiweenie
Golden retriever pyrenees lehibe mifangaro mpiompy
mpiandry ondry alemanina antsasaky ny voromahery
4 volana pomeranian alika